Mmadụ Bịa na-eleta anyị na ụlọ ntu Nke 5A26-1
site ha na 20-07-13
Mmadụ Bịa na-eleta anyị na ụlọ ndò Nke 5A26-1 Anyị na-aga ịga valvụ ụwa ngosi na Dusseldorf Germany si 27-29th November. Mmadụ Bịa na-eleta anyị na ụlọ ntu Nke 5A26-1. Anyị ga-aga ngosi ihe ngosi ụwa nke ụwa na Dusseldorf Germany site na 27-29th Nọvemba. Nabata na ileta anyị na buut ...
Nabata ndị enyi ileta anyị!
Future Valve Ball Co., Ltd, nke e guzobere na 2004, ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị afọ 10 nke ahụmahụ dị ịrịba ama n'ịmepụta BALLS & SEATS na akụkụ ndị ọzọ maka Valves Ball. Ntachi obi na iche iche na-eme ka ụlọ ọrụ na-elekọta nke ọma. Enweela ya na ISO9 ...
Companylọ Ọrụ Ga-aga PCVExpo 2016 Moscow
PCV Expo bu ahia ahia mba uwa maka nfuli, compressors na valves. Ihe ngosi a bu ihe omuma ihe omuma di nkpa banyere akụrụngwa pneumatic, valvụ, moto na injin. Ndị na-emepụta mba ụwa na-anọ na Expo PCV ọhụụ na teknụzụ ọhụrụ ha dị na ...